Ebe obibi na Khrushchev
N'ezie, usoro nke oge a nke ụlọ dị ndụ na Khrushchev kwesịrị ịdabere n'ogo nke oghere ahụ a chọrọ, nke dị na nke a dị ntakịrị, na ọtụtụ mpaghara mpaghara ga-adị n'ime ụlọ a.
Ụlọ ndụ oge ochie na Khrushchev
Ọ bụrụ na a na-arụ ọrụ maka ụlọ dị iche iche nke nwere ọtụtụ ọnụ ụlọ ihi ụra, ị nwere ike ilekwasị anya na ịmepụta n'ime ime ụlọ ahụ ime-ngosi nke ga-egosi onye ọbụla na uto ndị nwe ya. Ọ dị mkpa ịhọrọ otu ụdị kachasị ma họrọ ihe nkwụsị, na-esi na ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị kwụsịrị na oge ochie, mgbe ahụ ihe ngwọta zuru oke ga-abụ iji ụlọ dị ndụ na Khrushchevka na ọkụ . N'otu oge mgbe ị na-ahọrọ ngwá ụlọ, ọ dị mkpa ịhapụ akwa sọfụ a pịrị apị iji kwado mgbochi ọkụ ma ọ bụ sofa n'elu ụkwụ.
Ụdị kachasị mma maka obere ụlọ dị na Khrushchev ga-abụkwa ụdị ejiji nke oge a, ntakịrị ihe na ọgbara ọhụrụ. Ha anaghị achọ nnukwu ihe ndozi, yabụ ọbụna obere ụlọ agaghị ele anya. Ụdị dị mma nke oge a, ọbụna maka imewe obere ije-site n'ime ụlọ dị na Khrushchev, mgbidi abụọ ma ọ bụ karịa nke nwere ọnụ ụzọ na-eduga na ụlọ ndị ọzọ.
Ma iji dee ndị mmadu ma ọ bụ ụdị okike n'ime obere ụlọ dị ndụ agaghị adị mfe. N'ebe a, ọ dị mkpa ịnwa aghụghọ, dịka ọmụmaatụ, ijikọta ọnụ ụlọ dị ndụ na mbara ihu dị na Khrushchev, iji gbasaa ohere dị ndụ.
Ụlọ ndụ dị mma na Khrushchev
Mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji rụpụta ebe obibi dị na Khrushchev, iji gosi na n'ime ụlọ a, ọ bụghị nanị ebe a na-anabata ndị ọbịa, ma, dịka ọmụmaatụ, ụlọ iri nri ma ọ bụ ime ụlọ. Iji mee nke a ga-enyere razouuronevye ala ma ọ bụ ákwà mgbochi, yana agba dị iche iche nke mgbidi na ala na ebe ọrụ. Enwere ike ịchọta ebe obibi na ime ụlọ na Khrushchev iji ejiji abụọ, ma ọ dịghị atụ aro ka ịmepụta mpekere na-adịgide adịgide, n'ihi na nke a na-ezobe ohere.
Kitchen folding tebụl
Aprons nke iko na kichin na mbido foto
Kedu akwụkwọ ngebichi ịhọrọ maka okirikiri?
Edebe akwụkwọ ahụaja maka kichin
Ụzọ Art Nouveau
MDF ma ọ bụ chipboard - nke ka mma?
Ọnụ ụzọ na-abanye n'ụlọ
Ime na mbara ihu
Mgbidi ụlọ maka uwe na paseeji
Igpu uhie na-ekpuchi anya
Kedu ihe ị ga-eyi uwe akwa?
Ọkụ ụmụ anụmanụ na-arụ ọrụ
Ihe eji eji akwa ejiji na sarafans
Egwuregwu Ejiji 2015
Ụmụ nwanyị na - enwe obi ụtọ - esi tufuo?
Kedu afọ ole ka a na-akpọrọ ha na nri anụ ụlọ?
Mgwakota agwa maka bagels
Akpa na-egbuke egbuke
Ụbọchị nke iri atọ na atọ nke ime ime - ịmalite ịmụ nwa
Ịlụso onye bea ọgụ - ụzọ kachasị dị irè
Acha ọka - ọma na ihe ọjọọ
Jam si mulberry - bara uru Njirimara
Mgbawa n'ime ugbo
Mkparịta ụka na ụmụ amụrụ ọhụrụ
Varicose - nhazi mbụ - ọgwụgwọ
Kedu otu esi ahọrọ skates?
Etchpochmak na Tatar
Liam Hemsworth na Miley Saịrọs bu ụzọ pụta mgbe a maliteghachiri akwụkwọ akụkọ ahụ
Nri "Napoleon" na mmiri ara ehi
Kedu otu esi eme ka di na-atụ egwu ịla nwunye ya?